Ego ole bụ ekwentị nkwụ? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nkwụ ekwentị - azịza nkịtị
Nkwụ ekwentị - azịza nkịtị
Ego ole bụ ekwentị nkwụ?
Ọụgwọ$ 349.99 ma ga-adị na Nọvemba, mana ị nweghị ike ịpụ ma zụta ya n'onwe ya. Ọ bụ naanị dị ka mgbakwunye na nke ugbu a. Ọzọkwa, Steph Curry so na ya.Ọkt 15 2018
Ọnwa ole na ole gara aga, emere m akwụkwọ edemede na nke mbụ banyere ekwentị a, ebe a, nke a bụ ekwentị Pom Ọfụma, amaara m na mbụ Teich na-elekwasị anya n'ịtọhapụ ekwentị a bụ ịkọwapụta okwu ọnụ na obere ekwentị m amaghị n'echiche obere ọ bụ ma ọ bụ otu ọ ga - esi bụrụ na mmeghachi omume m bụ 100% ezigbo. Maara na ekwentị ahụ ga-adị obere, mana mgbe ị hụrụ ya obere, ị ga-ahụ na nha bụ isiokwu a na-enyocha na nyocha a, site na batrị na ngosiputa ngosi na akara ukwu ahụ, ọ bụ ihe kachasị ama. Njirimara nke ekwentị nkwụ a na m na-agbanye ekwentị a ma gbanyụọ ya kemgbe ọnwa ole na ole gara aga, dịka onye ọkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị na ekwentị na-enweghị atụ, mana ka anyị buru ụzọ tụlee ekwentị a dịka onye ọkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị. na isi m na onye na-akwado iOS, achọpụtara m na ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịbanye n'ime ekwentị gam akporo izizi m ogologo oge. Ekwentị Pom na-agba gam akporo 8.1 na Qualcomm Snapdragon 435 processor ọ nwere gig atọ nke RAM, ọ bụghị nke kachasị mma, ọ bụghị nke kachasị njọ.
Ọ bụ ezigbo ume maka ekwentị ewepụtara na 2018, mana ajụjụ bụ, ọ ga-eguzo maka ịrụ ọrụ naanị na 2020, nke ọma, ntakịrị ee na ntakịrị mba, ọ dabere na ojiji gị maka obere mmekọrịta azụmahịa. O doro anya, ị ga-ahụ na ị nwere ike iji ekwentị a maka email, ederede, na oku na-enweghị nsogbu ọ bụla, mana dabere na oku ugboro, ị nwere ike ịgba ọsọ na batrị ngwa ngwa. O nwere ike ịbụ na nsogbu batrị bụ nnukwu nsogbu m na ekwentị a, ọ na - esikwa ike ịkatọ ebe a n'ihi na ekwentị dị obere na enweghị ohere maka nnukwu batrị, ọbụlagodi na achọrọ m, ọ bụ oge 800 milliampere. batrị.
Yabụ ọ bụrụ na ị dị ka m ma na-elele mgbasa ozi gị, na-aza okwu, tweeting junk, ma ọ bụ na-egwu egwuregwu, ị ga-ahụ ekwentị a na-ebelata ndụ ya, mana ọbụlagodi na ị bụ? Jiri ya nwayọ Ihe niile dị nro na-elekọta mmadụ na-ebu ibu ngwa ngwa Tyde ihe adịghị njọ ka ị chere na obere interface na egwuregwu na-agba ọsọ nke ọma dịka m kwuru naanị atụla anya na ị ga-egwu ha ruo ogologo oge ọ bụ ntụpọ doro anya maka m na Ọ bụ Enweghị bọtịnụ na ekwentị a, ekwentị nkwụ nwere bọtịnụ dị n'elu aka nri ma nke ahụ bụ bọtịnụ ike Enweghị olu ma ọ bụ bọtịnụ ụlọ a na-ahụ anya na ekwentị a ngosipụta ahụ na-ahapụ ohere zuru oke maka ịrụ ọrụ ụlọ atọ, mana ọ bụ enwere oke ọrụ na ọ ga-amasị m ntakịrị ngebichi ma ọ bụ ọbụlagodi ụlọ a na-emetụ aka m na-ackingụ ya m hụrụ 7 m n'anya yana ya na m hụrụ iphone ọhụrụ ahụ n'anya ebe ọ na-enweghị ụda isi okwu ma ọ bụ naanị njikọ nke ekwentị a nwere bụ eriri Nchaji n'ọdụ ụgbọ mmiri. Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji ekwentị a dị ka ekwentị ekwesiri ike ijide n'aka na ị nwere bluetooth ntị ma ọ bụghị ha, isiokwu bụ 1080p na nchekwa dị n'ime naanị 32 gigs mana 32 gigs na obere ekwentị a abụghị ihe egwu, yabụ ịmara ihe ị maara na otu esi eji ekwentị gị n’onwe ya ọ ga-abụ ezigbo ọkwọ ụgbọ ala kwa ụbọchị maka gị maka meno mana m kpebiri iji ekwentị a dịka m chere ihe ọ bụ maka na nke ahụ bụ otu na-eso ya A ekwentị iji mejupụta ekwentị gị eyi kwa ụbọchị. Maka m nke nwekwara uru na ọghọm ya, ihe mgbakwunye mbụ bụ na ọ bara uru maka nrụpụta site na ekwentị m na-agbagharị egwu ma ọ bụ ihe ọ bụla mgbe ọbụ aka dị na ndụ, hapụ m ka m rụọ ọrụ m mgbe m nwere ya, Ọ dịkwa ntakịrị ngwa dị na ekwentị a, gbochiri m ịgagharị na ịnwe ekwentị abụọ. Nke a bụ ihe siri ike ikwu ekwentị n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ee ma ọ bụ ee, ọ bụghị n'ihi na ọ bụ mpempe akwụkwọ dị jụụ nke ọma. nkume ihe anyị nwere ike ịhụ maka nlọghachi nke obere igwe n'ime afọ atọ na ise na-esote, nke ga-esetịpụ ụkpụrụ maka nha nke Ihe ọzọ gbasara ịzụta Tinyphone a bụ na ọ gaghị agbaji akụ maka gị.
Achọtara m ọnụahịa dị iche iche maka ekwentị a na Amazon. M ga-ejikọ ha na nkọwa dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ị ka nwere mmasị ịtụtụrụ obere nwa a mara mma yana nke ahụ kwuru, m ga-eso enyi na-arụ ọrụ ọgbara ọhụrụ na Minematt kerịta igwefoto ahụ. ọ ga-agwa gị ihe ọ na-eche banyere afọ a Tom Phone Wepụ ya matt hello onye ọ bụla matt si ezigbo ụwa nyochaa ebe a ga-amasị m ịkele Tom nke mbụ maka ịhapụ m ka m sonye n'isiokwu a ma na ị ga-elele isiokwu niile, na anyị ihe niile kwesiri inye, echere m na ị ga-ahụ otu isiokwu ị ga - achọ mana ka anyị kwuo maka ekwentị Palm, agbanyeghị, dịka m kwuru, enyochare m ekwentị a na mbido afọ a yabụ nke a ga - abụ mgbakwunye nke na - ekpuchi ndị ọzọ. Ajụjụ na echiche banyere ekwentị a tinyere ụfọdụ ozi ndị ọzọ na-esonyeghị n'isiokwu a ihe dị mma, ekwentị a zuru oke Ọ bụrụ na ọ bụghị ekwentị, e mere nke a dị ka ngwaọrụ ndọtị dị ka smartwatch, mana akụkụ kachasị mma bụ na ọ bụ ka ekwenti na inwere ike s rue mgbe ịkpọ oku. Jiri egwu gụgharia egwu Jiri ngwa izi ozi dị ka WhatsApp na Watc h youtube ọtụtụ ụdị nwere ike ihichapụ ma ọ bụ nwee nkwarụ na n'ezie ihe ọ bụla achọghị m ka ewepụrụ ya ngwa ngwa.
Ihuenyo abụghị ihe ọjọọ niile, ọ bụ obere IP3 LCD nwere IPS 3.3, nke doro anya, mana ihe nkiri 720p YouTube na-eme. Ọ naghị adị njọ na ekwentị a, ọ bụghị ihuenyo kacha enwu ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma na anyanwụ ọ bụ ihe ijuanya na ọ dị mfe ịpị ekwentị a, mana enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ị nwere ike iji zere ịpịnye ihe ma ọ bụrụ na ịchọghị pịa ya dị ka olu iji dee ederede, batrị ahụ dị mma ma jọọ njọ.
Ezigbo mma bụ ọsọ ịgba ụgwọ, nke na-ewe ihe dị ka ọkara elekere maka 50 ma ọ bụ otu elekere maka batrị zuru ezu, mana buru n'uche na ọ bụ naanị 800 mil amps ga-adịgide ụbọchị niile ma ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ngwa ngwa agụụ, ma debe ụbọchị dị ka ekwentị mberede na ọkachasị mgbe ịnwere ọnọdụ nchekwa ike na nke ahụ bụ ihe ekwentị a bụ. ọ bụ ekwentị ndabere ugbu a nke ahụ zuru oke maka mmemme ngwa ngwa dị ka ịkpọ egwu na bluetooth na mgbatị ma ọ bụ ịzụ ahịa nri. Ọ dịghị mkpa ịghagharị gburugburu gram 180 ma ọ bụ ekwentị gị buru ibu mgbe ị nwere ike iwepụ ekwentị kaadị gram 63-gị n'akpa gị na ogo ụlọ ahụ dị ezigbo mma na aluminom a dị n'etiti na Gorilla Glass 3 n'ihu na azụ, ma site na ibu o yiri ka ọ siri ike ikewapụ ihuenyo site na ikpe dị mfe yana mgbe ị tụbara ya na ntinye mmiri, ọkwa IP68 a zuru oke maka nke ahụ ma ị nwere ike ịga maka ya na-egwu mmiri ọ bụrụhaala ekwentị anaghị ' t gawa n'okpuru ukwu ise ma obu ukwu ise ugbua, ihe di nma bu Ihe ndị ọzọ a na-eme na ebe m nwere ike ịkpọ asị ma ọ bụrụ na m kwenyesiri ike na igwefoto ga-arụ ọrụ, mana ọ nweghị ihe pụrụ iche, ọ ka mma karịa ngwa ọ bụla, ma igwefoto 13-megapixel na-arụ ọrụ yana 8-megapixel n'ihu igwefoto, ma na-ewere 1080p 30 okpokolo agba kwa nke abụọ na enweghi ngwa anya oyiyi, mana nke ahụ dị mma, enwere ọtụtụ atụmatụ igwefoto na ngwa a dịka nkwado HDR na ị nwetakwa usoro nhọrọ ntuziaka ihe. iPhone 11 ka Pro Max enweghi 32 gigabytes nke ebe nchekwa ma enweghi kaadi ebe nchekwa nke di ka ihe di nma, mana achoro m inwe oghere kaadi ebe nchekwa na esim huru banyere oghere kaadi SIM nke siri ike wepu, olee nzuzu siri ike, ekwentị a enweghị esnfc nke na-abụghị nnukwu nsogbu mana ọ pụtara na ịnweghị ike iji ngwa dị ka ụgwọ google, get nweta nkwado GPS zuru oke, agbanyeghị, mana nke ahụ ga-eme? Bibie batrị gị ma ọ bụrụ na ejikọtaghị ya na chaja.
N'eziokwu, ọ dịghị nke a kwesịrị ịbịa dị ka ihe ịtụnanya dịka ọ na-agba ọsọ zuru oke gam akporo gam akporo ma ọ bụ gam akporo 1 gaara enwe nghọta karịa, mana anyị ka na-enweta gam akporo zuru oke. Naanị ihu ala bụ na anyị nwere gam akporo 8.1 nke mara mma ochie ụbọchị ndị a.
Updatesnweta mmelite nche ọhụụ ọhụụ mana ka gam akporo 8.1 ọ bụ ezie na a tọhapụrụ gam akporo 11 ka anyị nwere ihe nhazi nke ga-abụ ihe ọjọọ n'ihi nha batrị, ọ bụghị nke kachasị njọ ma ọ bụrụ na ị na-eji Snapdragon 435 mgbawa nwere atọ. gigabytes nke RAM, ma ọ bụrụ na nke a bụ ekwentị gị na ekwentị 2018 ma ọ bụ ekwentị ọhụụ, ị ga-ahụ ọsọ ahụ. Site na nke a niile, nke a ka bụ ekwentị ezumike zuru oke ma ọ bụ iji dị ka ekwentị na-ere ọkụ ugbu a maka ngalaba a, achọrọ m ikwu maka ihe ọjọọ mana ọ bụghị ezigbo ngwaọrụ.
Echere m, enwere nhọrọ ndị ọzọ dị mma karịa ka ọ dịkarịa ala n'anya m, were ihe dịka Samsung A01 ma ọ bụ ọbụlagodi Samsung A10e wepu uru dị ala, mana nnukwu ihuenyo bụ ngwaọrụ ka mma maka otu ọnụ ahịa ejiri otu narị dollar onye nhazi ihe nhazi nke kacha mma kaadi nchekwa ekwekorita na-akwado batrị buru ibu buru ibu na nkwado ngwanrọ ka mma mana ihe kachasị mma banyere ekwentị nkwụ na ọbụlagodi taa ọ nweghị onye nwere ike iti ihe bụ eziokwu ahụ bụ na ọ dị ihe niile na kọmpat a ma ọ na-arụ ọrụ, daalụ , maka ime Merant nwere olileanya ịhụ gị n'oge na-adịghị anya, yana dị ka mgbe niile, ekele maka ilele nnukwu, ekele mattfrom ezigbo nyocha ụwa, m ga-emekwa ka unu hụ na ị lele nkọwa dị n'okpuru maka njikọ maka ọwa Matt ma tinye nyocha nkwụ ya. Ọ mara mma na-ekele gị, n'agbanyeghị agbanyeghị obi gị banyere obere ekwentị a, ọ tụrụ m n'anya ịhụ Pom ka ọ na-agba mbọ ihe ọhụrụ n'ihi na obere ekwentị dị obere, nke a bụ trailblazer nha bụ ihe atụ maka ihe niile anyị chere maka obere ekwentị nwere ike ịtụ anya N'afọ 2020 2021 na karịa nke ahụ, ọ dị kọmpat, dị gịrịgịrị ma zuo oke. Ọ bụrụ na ị banye na kọmputa, ọ mara mma nke ukwuu ma ọ dị mma, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ ga-abụ, ekele maka ikiri ọ bụrụ na ị mere ya kụrụ ịdenye aha ugbu a wee pịa ụda mgbịrịgba ọkwa ka ị ghara ịhapụ ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu ma mee otu ihe ahụ na Matt's channel matt ekele maka inye m ụfọdụ ọdịnaya.
Obi dị m ụtọ na anyị nwere ike ịme mmekọrịta a na nke ahụ ga-abụ maka anyị, ekele dịrị ụmụ okorobịa ruo udo ọzọ
Gịnị bụ isi nke ekwentị nkwụ?
N'ụzọ bụ isi, ndịNkwụbụ ama, ma ọ bụ isinzubebụ ịkwụpu gị na teknụzụ maka ntakịrị. Ọ syncs gị isiekwentịn'ihi ya, ị na-enweta gị niile ificationsma Ọkwa na oku, ma ya Life Mode mma-ajụkwa nkịtị niile alerts ruo mgbe ị na-enyo na ihuenyo.23 june Dec 2019
Nkwụ ekwentị - ọ dị mma na anyị ga-ekwu maka ya, ya mere ọtụtụ ndị nyocha ewerela nkwụ n'ọbụ aka ha echeghị na ọ bụ ekwentị nwere ike iwepụ maka iPhone ma ọ bụ Samsung, ọ dị njọ mgbe ha kwuru maka nkwụ. Hey, nabata na teknụzụ ọzọ na teknụzụ teknụzụ Liron Segev ebe m na-eme ka teknụzụ dị mfe ma ọ bụrụ na ekwentị bụ ihe gị Ngwa Ngwa Ngwa na Usoro iji Mee Ka Gị Nwee Nmepụta na Ojuju Ka anyị rute na ngosi nke taa. Nke a bụ ekwentị nkwụ, nnoo ọmarịcha obere ekwentị.
Na nkeji atọ na asatọ obere obere obere ekwentị, emehiela, ọ bụ gam akporo asatọ isi otu usoro, ọ bụghị PalmOS, ọ bụghị ụdị nke gam akporo, ọ bụ gam akporo zuru oke, nke pụtara na ngwa gam akporo gị na-agba na Nkwụ. More na nke ahụ ntakịrị oge mgbe e mesịrị, ugbu a na USA. Ọ dị naanị site na Verizon, dị ka ekwentị enyi, ị ga-eji ya na sistemụ nkekọrịta nọmba Verizon, nke pụtara na ị ka nwere nọmba Verizon bụ isi, ịcheghị ma ekwentị agbanyụrụ ma ọ bụ ị pụọ faịlụ ahụ n'ụlọ a nkwụ a ka na-akụ ị nwere ike ịkpọ oku, nata oku dị ka a ga - asị na ha sitere na otu nọmba mgbe ọ bịara n’ozi gị Mgbe i jiri ngwa Verizon’s Messaging Plus ngwa, ozi gị niile dị n’etiti ekwentị gị na nkwụ synced mgbe ị na-eji iPhone, dị mwute ikwu na ozi anaghị emekọrịta na usoro Gịnị bụ ndị nyochaa na-ezighi ezi? Ka anyị bido nke ọma, yabụ nke mbụ buru ibu bụ na ụfọdụ ndị na-ekwu na nke a abụghị ekwentị mgbanwerịta maka ekwentị iPhone ma ọ bụ Samsung, ọ dịghị egwu egwu.
Ihe niile dị na ekwentị a bụ na ị nwere ike ịhapụ isi ekwentị gị n'ụlọ. Nke a bụ ekwentị escort mgbe ị na-elegharị anya, mgbe ị nọ n'ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ma ọ bụ mgbe ị nọ n'ebe ọ bụla, ị ga-ahụ ka ezinụlọ niile na-ada n'ala gburugburu tebụl, nke ọ bụla hulatara ihu, na-ahụ ozi ederede na mmadụ nnọkọ YouTube na nkwukọrịta dị naanị n'uche ndị mmadụ ka ekwentị a na-enyere aka n'echiche bụ na ekwentị bụ naanị ngwaọrụ, ugbu a ụfọdụ ndị na - ekwu na ihe niile ị ga - eme bụ iji ekwentị ụlọ gị ma na - edozi nsogbu ahụ Ugbu a adighizi eme pings nne na nna amam na mgbe m puru achorom ijide n’aka na enwerem obi iru ala ma mgbe umu m choro m, enwere m ike ikpochapu m site na m tunyere ntule anya m nwere oji ndia nile na nkpu ahu ya na igwe gi naanị emela nke ọma, n'ezie ọ bụghị, ị jiri ihe abụọ dị iche iche atụnyere ka ndị mmadụ kwuo na ị ga-eji ihe ha emeghara ma ọ bụ ọnọdụ ụgbọ elu maka gị ntaramahụhụ anyị bụ nke mere na nkwụ aka gị enweghị isi. n'ihi na anyị adaghị ọzụzụ zuru oke. Anyị niile maara na anyị nwere ike ịme ya, mana ọ ga-abụ na anyị ga-eme ya ma mee ya oge ọ bụla, ọ ga-abụ na m ga-adụ ala n'eziokwu, nke ahụ abụghị ezigbo esemokwu, ọ dịghị mfe iji ma ọ bụ gam akporo yabụ ka anyị gbadaa, enwere ọkwa gị ị mepee ngwa gị ebe ha nọ n'ụlọ ahịa gị gbadata ma wụnye ha ma ọ na - arụ ọrụ dịka ekwentị gam akporo gị ugbu a site na N'ezie ị gaghị enweta ozi ịntanetị gị Manifesto riding a Little guy , ọ na-esiri ike n'elu, kpamkpam, ọ bụ isi nke anyị, mana ị ga-eji enyemaka google ma jiri ụda olu mee ihe karịa ka ị ga-etinye na faịlụ gị oge niile na ọ naghị arụ ọrụ ma ọ baghị uru iji ya na nkwanye ugwu anyi ekwenyeghi na nkwụ aka m ugbu a m gụrụ maka ahapụla m ejiri google map s jiri ya were m gị m nọnyeere m ọtụtụ oge ma ọ bụ ihe ọ kwesịrị ime, ọ bụ kpam kpam bara uru ee m na-aga Instagram Instagram Twitter Facebook ma hụ ihe ọ bụ ya mere ọ na-eme ihe niile ọ bụ naanị na obere obere ihuenyo na ọzọ m ga-alaghachi na isi na nke ahụ bụ isi nke inwe mgbapụta ugbu a, aghọtaghị m, nke ahụ dị mma, ọ bụghị, enwere nsogbu ụfọdụ m nwere pụtara, dịka ọmụmaatụ, o nweghị jacks headphone ma jiri bluetooth, ugbu a Bluetooth na-ewepu batrị 800 milliamp nke ndụ batrị nke ọma nke ahụ abụghị nke ukwuu, ugbu a ị nwere ezigbo 3-4 awa maka ya ma ọ bụrụ na ị na-eji Bluetooth wiw Bluetooth. -ma unu nile mara onye nwere olu di ike n’otu oge, na nke abuo bu igwefoto, ugbua igwefoto bu ihe efu na echefu m were ya otutu ihe di egwu ma obughi Pablo Low light gbaa adighi nsogbu, mana d ann n'oge ndị ọzọ ọ na - asacha ya wee kụrụ igwefoto ọzọ ma atụ uche m na - eme isiokwu banyere nke a nke na - akọwa didn'ttali anaghị arụ ọrụ nke ọma, ikekwe ọ bụ naanị ọnọdụ m nọ na - eche ọ dị ntakịrị ka m si ele anya n'ọbụ aka m bụ na ọ bụ akụkụ nke detox dijitalụ mana sti Aga m enye gị ohere ijikọ ka ị nwee udo nke uche ịmara na anyị ejikọtara 24 awa kwa ụbọchị na afọ ojuju ụwa anyị nọ na ya ozugbo, na-ejikọtakarị m na ọkwa niile dị site n'elu ụlọ nrụgide anyị. bụ site n'elu ụlọ n'ihi mkpọtụ ọ bụla anyị na-awụli elu iji hụ ihe na-ezighi ezi na ihe anyị ga-eme ka na-elele mgbasa ozi m mgbe m na-aga na ekwentị, ana m elele ozi ịntanetị m ee, m na-eme nke ahụ zuru oke, maa ọ bụghị na ọ dị mma detox , ụdị nke nta nke nta na ọ bụ ya mere m ji hụ ya n'anya ya hapụ ya mara m na nkwupụta ndị a n'okpuru Ọ bụrụ na nke a bụ ụdị ụdị detox dijitalụ ị dị njikere, biko mee ka m mara ihe ị chere na ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a biko nye ya mkpịsị aka nyere aka na ọwa ahụ nke ukwuu ma ọ bụrụ na ụdị a dị ka ọdịnaya, tụlee ịdenye aha iji chọpụta ụfọdụ n'ime isiokwu ndị ọzọ a dị mma na anyị ga-ahụ gị na mmemme na-esote n'ihi na webụ na-anabata ọ cheụ dị mfe maka ugbu a
Nkwụ ekwentị ahụ ọ nwere ike ịbụ naanị ekwentị gị?
Otú ọ dị, ugbu a, mmelite ọhụrụ na-emeNkwụ ekwentịotutu mgbanwe. Ọ bụ ezie na ọgaka na-arụkọ ọrụ dị ka onye ibengwaọrụ, jikọtara na otu akaụntụ ahụ dị ka ọ dịama, site taa gaa n'ihu ị ga-enwe ike iji ya dị kanke ginke mbuama. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ihe egwuregwu ụmụaka, ọ dịkwa fullGam akporo ekwentị.Eprel 4 2019
Kedu akara ngosi bụ ekwentị nkwụ?
Lọ ọrụ TCL
Ogologo oge ole ka batrị ekwentị nkwụ ahụ na-adịru?
NaNdụỌnọdụ,Nkwụna-enweta ụbọchị niilendụ batrị.NdụNdị ọrụ ọnọdụ nwere ike ịgafe ụbọchị zuru okeNkwụ'siji ya. Oge nkwụ ụgwọ: ihe dị ka nkeji 68.Nwere ike 30, 2019
Ogologo oge ole ka ekwentị nkwụ?
Na Life Mode,Nkwụna-enweta ndụ batrị ụbọchị niile. Ndị na - ebi ndụ Ndụ nwere ike ịgafe ụbọchị zuru okeNkwụ'siji ya. Oge nkwụ ụgwọ: ihe dị ka nkeji 68.Nwere ike 30, 2019
Ekwentị nkwụ ahụ ọ nwere mgbanye ntị?
Akụrụngwa ahụ na-agbakwa nke a ume site na iji ihu igwe dị ala na igodo bọtịnụ na-ejighị ya zuru ezu. O nwedịrị ike ịnwe ọnọdụ ịntanetị nke mechiri ịntanetị niile iji mee ka ị kwụpụ kpamkpam mgbe ịchọrọ ma gee egwu (ọ nweghịjaketị isi, doro anya).Mar 8 2019
Ogologo oge ole ka batrị nkwụ ahụ na-adịru?
Ndụ batrịdịgasị naNkwụdabere n'otú i si eji ya. A na-ekwu yaikpeazụntakịrị ihe karịrị ụbọchị atọ na ọnọdụ njikere ma jiri yaNdụỌnọdụ, ị ga-enweta ihe ọ oneụ oneụ otu ụbọchị. Na njikọta zuru oke naNdụỌnọdụ kwụsịtụrụ, yaganaanịikpeazụawa asatọ.2 nov. Ọkt 2018
ụkwụ na-eweta ab mgbatị ahụ
Nkwụ ekwentị ọ na-enweghị mmiri?
Akpa,ekwentịn'onwe ya. IheNkwụ, siteNkwụ, bụ obereGam akporo- lozenge nwere ikike 3.3-inch, ihuenyo 1,280-by-720. Emecharaekwentịnke ahụ dabara n'akpa azụ gị, ma ọ bụ n'akpa ego gị, ọzọ. Enwere eriri aka maka ya, ọ dịkwamgbochi mmiri, ya mere i nwere ike were ya na-egwu mmiri.Ọkt 15 2018
Ndi ekwentị nkwụ nwere ikuku ikuku?
Ọ bụghị,Nkwụ na-emeọ bụghịkwado wireless Nchaji.Ọkt 4 2018
Kedu ụdịdị ekwentị nkwụ
Nkwụ Palm gam akporo ama. Ekwuputara Oct 2018. Ihe ngosi 3.3 ″, Snapdragon 435 chipset, 800 mAh batrị, 32 GB nchekwa, 3 GB Ram, Corning Gorilla Glass 3.
Enwere ike iji ekwentị nkwụ mee ekwentị?
Jiri nkwụ dị ka ama gị kwa ụbọchị, zuru oke na nọmba ekwentị ya na atụmatụ data. Jikọọ nkwụ na Numbershare na akara dị ugbu a ka ọ na-ekenye nọmba ekwentị gị ugbu a. Zuru oke maka atụmatụ ezinụlọ na ekwentị izizi maka ụmụaka iji mee ka ndị ị hụrụ n'anya jikọọ, mana anaghị eri oke.
Nkwụ ekwentị ọ pere oke oke maka gam akporo?
Mkpebi 720p na obere nha dị ka nkọ. 3.3 sentimita asatọ dị oke obere maka ekwentị gam akporo ọgbara ọhụrụ. Ọdịnaya ebipụla, ọbụlagodi ọrụ dị mfe bụ ụfụ. Foto nke ehihie were ekwentị Palms adịchaghị mma maka Facebook. Ọ baghị uru iji obere ọkụ.